Vavaka ho an'ny fahafatesana tsara, noforonin'ny Eveka Devie of Belley – gloria.tv
ANDRIAMANITRA Tsitoha, ilay mpandray anjara amin'ny fiainana sy ny fahafatesana, miankohoka eo anatrehanao, dia tonga hangataka aminareo ny fahasoavana farany sy manan-danja indrindra amin'ny fahasoavana rehetra aho, izany hoe ny fahasoavana ho faty masina. Ataovy ahy, Tompo ô, maty noho ny fahafatesan'ny marina aho, na dia be loatra aza ny fiainako ka tsy nifanaraka tamin'ny an'ny mpanota. Koa omeo ahy aloha ny fanaintainana avy amin' ny fahotako. Efa nibaboka izany tamin' ny fanompoan' ny famindram-ponao aho; Tsy niraharaha aho, ary te hanonitra azy ireo amin'ny alalan'ny fisotroan - dronono marina sy amin-kitsim-po. Feno fahatokiana ny fampanantenanao, afaka mino aho fa efa namela ahy ianareo; mba hahazoana antoka bebe kokoa azy ireo dia halako indray amin'ny foko manontolo izy ireo, ary tiako hofafana amin'ny isan'ny androko izay tsy zatra nanompo anareo.
Saingy tsy ampy hanomezana toky ahy izany: ny fikirizana dia fahasoavana izay tsy mendrika anay, ary ny fotoanan'ny vavaka ihany no omenareo. Izany no antony ahafahako mangataka izany, indrindra fa amin'izao fotoana faratampony izao rehefa mampitombo ny ezaka ataony mba hampahatahotra antsika sy hampiala antsika amin'ny fahatokiana izay tsy maintsy ananantsika ao anatinareo ny fahavalon'ny famonjena. Noho izany, Tompo ô, ho an'ireo fahasoavana rehetra noraisiko dia ny fanaovana ny tenako ho mahatoky amin'ilay fanapahan-kevitra ataoko mba hampiasako mandritra ny androm-piainako sisa mba hanatanterahana ny andraikitro rehetra. Eny, Andriamanitro ô, tiako ankehitriny ny hanaraka ny ohatry ny olomasina, mba hanetry tena, hanetry tena, ho maotina, ho mailo, ho mailo amin'ny tenako, hihaino ny fivavako sy ny fampiharana ny hatsaran-toetra izay tsy ananako.
Tompo ô, afaka miantehitra amin'ny fanapahan-kevitro ve aho? Tsy tokony hanentana ny fanahiko amin'ny tahotra ve ny traikefa mampalahelo niainako tamin'ny fahalemeko? Eny: na dia eo aza ny toe - tsaiko tsara ankehitriny, na dia eo aza ny fahafantarana rehetra horaisiko amin'ny hoavy, dia matahotra ny haniasia indray aho, hanalavitra ny tenako aminareo noho ny fahotana. Aza mahafoy ahy amin'izany, Jehovah, Tompon'ny fahatsarana! mandondona ny varavaran' ny foko; hazavao aho, ka enjeho aho, sazio aho raha ilaina; aza mitsitsy ahy, ary ataovy izay hahasambatra ahy ny miverina aminareo. Ny zavatra amporisihako ambonin'ny zava-drehetra dia ny tsy iantsoanareo Ahy ho aminareo amin'ny fahafatesana tampoka sy tsy ampoizina, amin'ireto toetra meloka ireto; Izany no hanomezanao fotoana ahy hitsitsiana; Izany no hanomezanao ahy ny fitaovana rehetra ilaina mba hanaovana fahafatesana kristianina.
Inra! Tompo ô, inona no ho nahatonga ahy ho faty tampoka tamin'izao fotoana izao na tamin'izany fotoana izany teo amin'ny fiainako...? Raha tsy nanasitrana ahy tamin'izany aretina izany sy ny aretina toy izany ianao..., voaro amin'ny loza toy izany...? Aoka ianao ho voatahy an'arivony miaraka amin'ny famindram-po izay efa nampiasainao tamiko! Tsy mahay mankasitraka aho, saingy tsy te ho mpankasitraka, ary te-haneho fankasitrahana aminao aho amin'ny alalan'ny fanararaotana ny fotoana izay hanomezanao ahy, amin'ny alalan'ny fanamboarana ireo ohatra ratsy nomeko, ny fotoana izay nahavery ahy. Hianao, Andriamanitro ô, Izay manome aingam-panahy ahy amin'ireto vahaolana karama ireto, ka omeo ahy koa ny fahasoavana hanatanterahana azy.
O i Jesoa, izay maty teo amin'ny hazofiliana mba hampianatra antsika ho faty tsara sy hahazo antsika ireo fahasoavana ilaintsika amin'izao fotoana izao ka ho mandrakizay, dia tonga androany aho mba hanararaotra ny ohatra asehonareo ary hangataka ny fanampianareo mahery vaika. Aingam-panahy aho amin'izany fametraham-pialàko izany ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay tena mitoetra aminay amin'ny fotoan'ny fijalianao mampahory; omeo ahy izany herimpo izany, izany faharetana mahery fo izany, dia ny fahanginan'Andriamanitra fa talanjona ireo rehetra manodidina anareo. Nampanantena mpanota efa ho faty teo akaikinao ianao mba hampahafantatra azy ao amin'ny paradisanareo: mpanota velona izay mitaky fankasitrahana mitovy amin'izany ihany koa, raha tsy misy ny fanavotana anareo, satria amin'ny alalan'ny fahafatesana masina ihany no hahazoana antoka ny famonjena antsika.
Ry Maria masina, Renin'Andriamanitra ô, tsy very maina, tsy very maina ny fangatahako anareo isan'andro, na imbetsaka isan'andro aza, mba "hivavaka ho ahy mpanota mahantra." Na dia malemy aza ny fankatoavako dia mety ho imbetsaka tamin'ny filazana ireo teny ireo, tsy ho vitako ny tsy hamantatra fa nahazo fahasoavana maro ho ahy ianao nandritra ny fiainako: izany no antony namerenako tamim-pahatokiana vaovao hoe: "Mivavaha ho ahy, mpanota mahantra, ankehitriny sy amin'ny ora hahafatesako."
Ny Anjely Mpiambina tsara ahy, amin'ny fotoana hahafatesako no tena ilaiko hampitomboana ny fikarakarana feno fiantrana izay nalainao nandritra ny fiainako, satria amin'izay fotoana izay ihany aho vao afaka mijinja ilay voankazo amin'ny fomba azo antoka. Mangataka azy ireo mialoha aho anio, ary manolora anareo mba hanadino ny fanitsakitsahako rehetra, ny fanoherako rehetra ny fitaomam-panahyreo masina, mba hahatsiaro fotsiny ny iraka izay noraisinao mba hampahafantarana ahy any an-danitra.
Hotahiana an'i Masindahy Josefa, izay manana fahasambarana ho faty eo an-tsandrin'i Jesoa sy i Maria, ary mendrika ny ho mpiaro sy mpiaro ny maty amin'izany, dia mangataka anao mialoha aho amin'izao fotoana izao, amin'ny maha-tapany monja ahy, mety tsy ho afaka hanao izany aho. Namorona ny hijery ahy ho faty àry izy.
Ary ianareo koa, ry Mpiaro ahy mendrika, ry Olomasina izay manana ny anarany na izay manana fanoloran-tena manokana, dia mangataha ny proteininao mba hampiasaiko amin'ny fomba masina mandritra ny androm-piainako sisa izay avelan'Andriamanitra ho ahy mba tsy hisy na inona na inona hanakana ny fahatanterahan'ny faniriako ho faty masina.
Ry Jesoa mamy indrindra, aza mpitsara ahy, fa Mpamonjy! (Avereno in-telo ity fihantsiana farany ity.)
(Avy amin'ny The Divine Wonders in the Fanahin'ny Afofandiovana, nataon'i Fr. G. Rossignoli, ao amin'ny Fikambanan'i Jesoa)
12213 5 hours ago